Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao isan-karazany » Cycas dia faly tamin'ny fandrosoana tany Soisa
Cycas Hospitality dia manohy mampandroso ny fandaharan'asa fanitarana fatra-paniry laza, tamin'ity volana ity nanao sonia ny hotely Swiss voalohany.
Ny Holiday Inn Express & Suites Sion 119-efitra dia hotantanan'ny mpandraharaha pan-Eoropeana nahazo loka tamin'ny fifanarahana fanofana voalohany niaraka tamin'ny vondrona fampiasam-bola an'ny Credit Suisse Asset Management.
Cycas sy IHG Hotels & Resorts dia niara-niasa hitondra hevitra faharoa Holiday Inn Express & Suites ho any Soisa.
Ny portfolio Cycas izao dia mandrakotra firenena 6 eoropeana - Belzika, Frantsa, Alemana, Holandy, Soisa, ary UK.
Rehefa misokatra amin'ny fararano 2024, ity trano vaovao ity dia hanolotra efitra 95 mahazatra Holiday Inn Express sy suite 24 miaraka amin'ny lakozia eo akaikin'ny garan'i Sion, miampy trano fisakafoanana eo amin'ny gorodona eo an-toerana mba hanararaotra ny toerana misy azy ao anatin'ny trano. distrika Cour de Gare vaovao sy amin'ny efitrano fampisehoana fampisehoana vaovao. Ny vahiny dia afaka manararaotra ny gym 24/7 sy ny efitrano fivoriana.
Ny trano fandraisam-bahiny dia ho ivon'ny fivoarana ara-barotra lehibe natao hanararaotra ny toeran'i Sion ho foibe ara-toekarena sy ara-barotra ao amin'ny faritra ary mampifandray ny afovoan-tanàna mavitrika amin'ny tanàna taloha.
Ny tetikasa Cour de Gare vaovao, tarihin'ny Comptoir Immobilier, dia hanangona birao maherin'ny 10,300m², trano fonenana 300 ary trano fivarotana 5,700m². Ny complex koa dia hampiditra ny iray amin'ireo efitrano fampisehoana sy fihaonambe lehibe indrindra ao amin'ny kanton'i Valais - mifatotra amin'ny hotely - miampy fiantsonan'ny fiara ambanin'ny tany ho an'ny fiara 625.
Ny trano fandraisam-bahiny ihany koa dia napetraka tsara ho an'ny EPFL Valais Wallis ivon-toeram-pikarohana siantifika - ivon-toeram-pahamendrehana miaraka amin'ny mpiasa 400 mahery - izay ahitana ny campus Energypolis School of Engineering.
Amin'ny maha-renivohitr'i Valais – iray amin'ireo faritra fizahan-tany malaza indrindra any Soisa – ilay trano fandraisam-bahiny vaovao dia mety tsara amin'ny fanararaotana ireo toeram-pialam-boly malaza indrindra any Eoropa. Ny Four Valleys, faritra fanaovana ski lehibe indrindra any Soisa, dia mandeha 30 minitra monja amin'izao fotoana izao, saingy mety ho azo idirana kokoa ao anatin'ny taona vitsivitsy aorian'ny fisokafan'ny hotely raha toa ka misy tetikasa fiara tariby vaovao naroso izay manome fifandraisana mivantana 20 minitra avy any amin'ny hotely. gara mifanila amin'ny hantsana.
Sion dia ao anatin'ny adiny iray ihany koa ny Zermatt, Verbier, Chamonix Mont-Blanc ary Portes du Soleil. Io no faritra fanaovana ski lehibe indrindra mifamatotra eran-tany.